Location: musha » Kutumira » Caribbean » VeCaribbean vanojoinha Airbnb Rarama uye Shanda Kwese kwese mushandirapamwe
Sezvo kuchinjika kunova chikamu chechigarire chetsika zhinji dzekambani, Airbnb inoda kuita kuti zvive nyore kune vashandi kutora mukana wekushanduka kwavo kuchangoburwa. Iine mazita anopfuura mamirioni matanhatu pasi rese, chikuva chakatangwa neChina chapfuura chirongwa chayo che "Rarama uye Shanda Kwese", danho rinoenderera mberi rekushanda nehurumende neDMOs kugadzira imwe-stop-shopu yevashandi vari kure, uye kuvakurudzira kuti vaedze zvitsva. nzvimbo dzekushanda, uku uchibatsira kumutsiridza kushanya uye kupa rutsigiro rwehupfumi kunharaunda mushure memakore ezvirambidzo zvekufamba.
Kunharaunda yeCaribbean, Airbnb yakaona kuti:
Chikamu chehusiku hwakarongerwa kugara kwenguva refu muQ1 2022 chakapetwa kaviri zvichienzaniswa nenguva imwe chete muna 2019.
MuQ1 2019, ingangoita 6% yezvese kubhuka yaive yekugara kwenguva refu, nepo muQ1 2022 iyi muzana yakasvika ingangoita gumi%.
Huwandu hwehusiku hwakarongerwa kugara kwenguva refu hwakapetwa katatu muQ1'22 zvichienzaniswa neQ1'19.
Nezviri kutaurwa izvi, Airbnb neCaribbean Tourism Organisation (CTO) vakabatana kusimudzira Caribbean senzvimbo inogoneka yekugara nekushanda chero kupi zvako, kuburikidza nekutangwa kwedanidziro yavo ye "Basa kubva kuCaribbean". Mushandirapamwe uyu wakagadzirirwa kuratidza uye kusimudzira nzvimbo dzakasiyana siyana kuburikidza nepeji yekumhara inopa ruzivo nezve digital nomad visa kune imwe neimwe nyika, uye zvakare inosimbisa yakanakisa Airbnb sarudzo dzekugara nekushanda kubva. Iri peji rekumhara rekusimudzira richave rakasiyana nemamwe pasi rese uye richaratidza zvinotevera gumi nematanhatu ekuenda kunzvimbo senge sarudzo dzeDigital Nomads: Anguilla, Antigua & Barbuda, Barbados, Belize, British Virgin Islands, Cayman Islands, Dominica, Guyana, Martinique, Montserrat, St. Eustatius, St. Kitts, St. Lucia, St. Maarten, Trinidad.
"Kudzoreredzwa kwakasimba kwekushanya kweCaribbean kwave kuchitungamirwa nehunyanzvi uye kuda kutora mikana, sekusimuka kwemanomads edhijitari uye kuvandudza zvirongwa zvekugara kwenguva refu kusiyanisa ruzivo rwevashanyi mudunhu. CTO inofara kuti Airbnb yaona Caribbean seimwe yekuratidza muchirongwa chayo chepasi rose Rarama uye Shanda Kwese, uye mukuita izvi, inotsigira kuenderera mberi kwebudiriro yedunhu. ”- Faye Gill, CTO Director, Membership Services.
"Airbnb inodada kubatana zvakare neCTO kuitira kuti tirambe tichisimudzira nzvimbo dzakasiyana muCaribbean kuitira kuti vanhu vashande uye vafambe mukati. Mushandirapamwe uyu ibasa idzva rekubatana richaramba richibatsira nekusimudzira dunhu rakanaka. " – Airbnb Policy Maneja weCentral America neCaribbean Carlos Munoz .
Kudyidzana uku ndechimwe chezvirongwa zvakawanda muchirongwa cheCTO chirikuenderera mberi chekubatsira nhengo dzayo kuvakazve kushanya uye kuvhenekera mwenje pazvirongwa zvedigital nomad munzvimbo dzavanoenda.
Airbnb Caribbean Caribbean Tourism Organisation Central America ushanyi